Isigaxa kwi-anus, iimpawu, iimpawu kunye neengcebiso | Amadoda aQinisekileyo
UPaco Maria Garcia | | ZeMpilo
Nangona kungabonakali ngathi, i-anus yenye yezona ndawo zibuthathaka esinayo emzimbeni wethu. Ithumba kuloo ndawo, inxeba, ukwenzakala, linokuvelisa iintlungu kwaye likhokelele kusulelo.
Kukho oko umahluko phakathi kwamaqhuqhuva, i-polyps, kunye ne-hemorrhoids. Ezi ezimbi efanayo, kodwa iimpawu zabo.
2 Akukho ntlungu okanye ukopha
3 Xa iintlungu kunye ukurhawuzelela
6 Ukuqunjelwa kukwavelisa amaqhuma kwi-anus
7 Isifo sokukrala kwebele
8 Izigaqa kwi-anus ngenxa ye-pilonidal cyst
9 Amaqhuma ngenxa ithumba anorectal
Iqhuma elisemngxunyeni alidli ngokubonakala ngesiquphe, kuyinto eqhelekileyo ukuba ibeyiyo ngenxa yezifo ezithile. Ukuqunjelwa kuhlala kungoyena nobangela.
ICEBISO lezeMpilo: I-anus kunye ne-penis zizinto ezibaluleke kakhulu kwisini somntu. Ukuba awonwabanga bubungakanani bendoda yakho kwaye ufuna ukuyandisa, sicebisa khuphela incwadi ye-master master ngokunqakraza apha
Los Iimpawu zixhomekeke kwisifo ebangela ukudumba kwi-anus. Phakathi kwabo, kukho ubushushu obuphezulu kuloo ndawo, iintlungu xa uhleli kwaye uzithuma, utshisa, urhawuzelela kwaye urhawuzelela.
Akukho ntlungu okanye ukopha
Xa kungekho ntlungu okanye ukopha, inokuba ngamaqhuma aqhelekileyo kwi-anus, okanye nakwisiqalo se-hemorrhoids. Ngayiphi na imeko, i ukuhlolwa komzimba ngumqeqeshi wezempilo. Kufuneka kuthintele ukuxhaphaza indawo kunye nokuzenzela amayeza.
Xa iintlungu kunye ukurhawuzelela
Amaqhuma asezindleleni ziluhlobo lwamaqhuma abangela ukuba, xa uzithuma, a imvakalelo intlungu, ukutsha kunye ukurhawuzelela. Ngokwesiqhelo amaqhuma asezindleleni (ngokungafaniyo nezinye izifo, ezinjengee polyps), anobungozi, kwaye awenzi ngxaki inkulu.
Kuyacetyiswa usele amanzi amaninzi, ukutya okunefayibha eninzi kunye neepads ngemveliso esebenzayo kunyango lwakho.
Ukuqhekeka kwi-anus kuya kuba Inxeba elibangelwa lixesha elidlulileyo lokuqhinwa. Ngenxa yokuqhekeka kwi-anal sphincter, i-fissure ayikwazi ukuphilisa. Zinokuvela iintlungu eziqatha, ngakumbi xa uzithuma, kunye nokopha.
Unyango lunokuba lonyango, kwiimeko ezincinci, okanye lifune ungenelelo lotyando.
Yimeko evela kuba imithambo ejikeleze umngxuma wokudumba, ngezizathu ezininzi. Isenokuba semva kwexesha lokuqhinwa, ngenxa yoxinzelelo olugqithisileyo kuloo ndawo, ukutyeba kakhulu, ukutya okungalunganga, nangenxa yokubeleka. Kolu xinzelelo, izihlunu zempundu zinokwandisa zize zophe.
Ngapha koko, lIimvumba ziphakathi kwezona zinto zibangela ukubumba kwindawo ye-anus. Zeziphi iimpawu ezinazo izisu?
Amaqhuma abuthathaka avela kwindawo engasemva.
Xa sicoca i-anus yethu kwigumbi lokuhlambela, kuvela imikhondo yegazi.
Ukungaphatheki kakuhle xa uhleli okanye ukhupha igumbi lokuhlambela.
Unyango lwe-hemorrhoids zininzi izisombululo, ukusuka kwi-laxatives, iipilisi zentlungu, iingxowa zamanzi, njl. Kwiimeko ezinzima kakhulu utyando luyimfuneko.
Ayisiyo imeko enzima okanye kunzima ukuyinyanga. I-hemorrhoids enganyangekiyo inokubangela umonakalo omkhulu.
Ukuqunjelwa kukwavelisa amaqhuma kwi-anus
Xa ixesha elininzi lidlula phakathi kokufuduka kunye nomnye, sithetha ngokuqunjelwa. Kwiimeko ezininzi kwezi kunokuvela isigaxa esikruqulayo esinqeni. Iimpawu zokuqhinwa zahluka kakhulu, ukusukela kwiintlungu zesisu, isicaphucaphu, ukugabha, ukudinwa kunye nokubola, ukudumba kwindawo esiswini, ukukhutshwa kwamathumbu okwomileyo kunye nobunzima, ilindle elincinci, njl.
Ukunyanga ukuqhina kuhlala kucetyiswa ukuba sonyuse ipesenti yethu yefayibha, ukutya okuziinkozo, imifuno, iziqhamo, Kunye nokusela into engamanzi. Kwiimeko ukuqhina ebantwaneni kunye nabafazi abakhulelweyo, nokuba kuyacetyiswa ukuba utyelele ugqirha.
Isifo sokukrala kwebele
Nangona kungabonakali ngathi, xa sine-colitis sinokuphucula amaqhuma kwi-anus. Esi sifo ngesiqhelo sisisiseko seentlungu kwindawo yesisu, ukuqhina, isiyezi, ubuthathaka kunye norhudo. Enye yezinto ezinobuninzi bezifo zesisifo kuluntu lwanamhlanje luxinzelelo lweemvakalelo.
LIimpawu ze-colitis ziyaziwa. Ukwenziwa kwamaqhuma ajikeleze i-anus kuhamba kunye nokuqunjelwa, ukudumba kwesisu, utshintsho kunye notshintsho ekusebenzeni kwamathumbu, ukungalali, kunye nokudakumba.
Ungayinyanga njani i-colitis ngokufanelekileyo? Kuyacetyiswa ukuba uphucule indlela otya ngayo, wenze imithambo yonke imihla, iziyobisi ezonyanga uxinzelelo lweemvakalelo, kunye namayeza amiselwe ngugqirha okanye yingcali.
Izigaqa kwi-anus ngenxa ye-pilonidal cyst
Ukuqulunqwa kwe-pilonidal cyst kwenzeka kwindawo ephakathi kweempundu. Ngokubonakalayo, sisiqhuma esimpundu. Nokuba le cyst ingakhokelela kusulelo, isiba mandundu umfanekiso. Ngokomgaqo akukho zimpawu zibalulekileyo, ngaphandle kobukho besigaxa esincinci ecaleni kwendlela.
Emva kokuba i-pilonidal cyst ifunyenwe, Ukuthintela indawo ekubeni yosuleleke, kufuneka ukuba ukhuphe amanzi kakuhle kwaye uthathe amayeza okubulala iintsholongwane.
Amaqhuma ngenxa ithumba anorectal
Esinye isizathu esiqhelekileyo sokubonakala kwamaqhuma kwi-anus yile ye-anorectal abscesses. La mathumba ahlala evela kwingqokelela yobofu kwindawo engasemva. Ngale ndlela, kubakho iqhuma elincinci. Imvelaphi yala mathumba ihlala ichaphazeleka okanye ngenxa yokuba amadlala omqala aye athinteleka.
Phakathi kweempawu zamathumba anorectal, kukho umkhuhlane, ukuqhina, iintlungu, iintlungu kwindawo leyo, ukubonakala kwesigaqa, njl.
Los Iintsholongwane kunye nokuthomalalisa iintlungu kuya kunceda ukunyanga usulelo, ukuba kunokwenzeka. Kwiimeko ezinzima kufuneka ubhenele kuqhaqho.
Iingcebiso malunga nokukhuphela i-anus
Imithombo yemifanekiso: CuidatePlus.com / Natursan / YouTube / ukulima.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Isigaxa kwi-anus
ULouis fonsy sitsho
Ndiyifumana inkcazo ilungile kwaye kulula ukuyiqonda, iluncedo kakhulu
Phendula uLuis fonsy
lamine mouhamed sitsho
Molo, ndifuna ukubuza umbuzo.Ndifumana umjikelo esileni wam rhoqo kwiminyaka emininzi kwaye uhlala kwindawo enye.Nanini na xa kusiza kum, kufuneka bavule ukuze basuse ubofu kwaye ndifuna ukwazi unobangela… enkosi wena
Phendula mouhamed lamine
Molo, kutsha nje ndihleli ndinesisu, namhlanje ndizikhuphile kwaye isitulo sam siphume nzima kakhulu njengelitye kwaye sityebile, umvundla wam ubuhlungu, xa ndigqibile, ndiye ndabona ukuba iintlungu zisamile, ndakhangela umngxuma wam kwaye ndiyabona ukuba Isigaqa esincinci malunga nodonga lwe-anus, andazi ukuba oku kubangelwe sisihlalo esityebileyo nesomeleleyo? Inqaku kukuba i-anus yam iyatsha kwaye ibuhlungu, ngoku andazi ukuba ndingayithatha phi le nto,
UDerby Barrios sitsho
Molo, ndiyazi ukuba sisifundo esingathandabuzekiyo kuthi madoda, kodwa ndiyayiqonda into ephambili kuthintelo kunye nokusebenzisana kwezempilo. Kwenzeka kum ukuba kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo ndaziva ndinesigaqa esingaqhelekanga kunyaka wam, into endingazange ndiyive ngaphambili, ndazama ukuzibhala ngayo ngaphambi kokuba ndothuke ndiye kugqirha. Kwaye oku, kuba andiva zintlungu okanye ukungonwabi, kodwa ngenxa yokuba ndiyazi umzimba wam ndiyazi ukuba ayiqhelekanga, kuba wawungekho. Ndingavuya ngengcebiso kagqirha kum ngayo.
Phendula kuDerby Barrios
Molo zinjani izinto? Bendineqhuma emngxunyeni wam kangange veki ezimbini kwaye ekuqaleni bendicinga ukuba ngamaqhuma, kodwa alikapheli kwaye lisopha, inokuba yintoni? Andikayi kwagqirha, ndizinike ioyile yeentlungu kodwa iintlungu besele ziphelile, ngoku kuphele nje ndiyopha, enkosi ngokuphendula !!
Iyakuba njani imfashini yamadoda ekwindla lonyaka?